Ukukhusela iM & Ms Candies
Ifa leMfazwe yaseMzansi yaseSpain
I-M ne-Nksk khondi ye-chocolate enye yezona ziwayo zidumileyo kwihlabathi, i-movie eyaziwayo kakhulu ephathekayo eduze ne-popcorn, kwaye i-Halloween edlalwa kakhulu ephathwayo eMelika.
I-slogan eyaziwa ngayo ngokuthi i-M & N idayiswa- "Ubisi-tshoksi yobisi luyanyakazela emlonyeni wakho, kungekhona esandleni sakho" -nokwenzeka ukuba yinto ebalulekileyo ekuphumeleleni kwamehlo, kwaye imvelaphi yayo isukela kwiminyaka ye-1930 kunye ne-Spanish Civil IMfazwe.
Ihlathi leMarsi libona ithuba
Wayesele eyingxenye yenkampani ye-candy eyayinomndeni ngokubambisana noyise, emva kokuzisa ibhanki ye-candy yaseMilky Way ngo-1923. Nangona kunjalo, uyise kunye nendodana ayengavumelani kwizicwangciso zokwandisa ukuya eYurophu, kwaye ekuqaleni kwee-1930, kwahlukana noyise, Ihlathi lafudukela eYurophu, apho yabona amasosha aseBrithani elwa kwiMfazwe yombutho yaseSpain edla i-Smarties i-candies-i-chocolate yamapositi kunye negobolondo elukhuni, eyayithandwa ngamajoni kuba yayingcolile kakhulu i-chocolate.
I-M & M i-Candies iyazalwa
Emva kokubuyela eUnited States, ihlathi leMarta laqala iqela lakhe, UkuThengiswa kweZiNko zokuThengisa ukutya , apho yaphuhliswa khona, phakathi kwezinye izinto, iRicy Rice ne-Pedigree Pet Foods. Ngomnyaka we-1940 waqala ukubambisana noBruce Murrie (omnye "M") kwaye ngo-1941 amadoda amabini anelungelo lobunikazi lweM & M. Ukuphatha kwakuqale kuthengiswa kwiibhubhu zekhadibhodi, kodwa ngowe-1948 ukupakisha kwatshintshela kwisikhumba seplastiki esikwaziyo namhlanje.
Eli shishini laliyimpumelelo, kwaye ngowe-1954, i-peanut M & Nks yasungulwa-into engabonakaliyo, ekubeni ihlathi leMarta lalifa ngenxa yokufa. Ngaloo nyaka, inkampani yathengisa isiqhelo esingaqhelekanga esithi "Amanqamlezo Emlonyeni Wakho, Esisandleni Sakho".
Ihlathi leeMva kamva
Nangona u-Murrie kungekudala washiya le nkampani, ihlathi leMarta liyaqhubeka likhula njengomntu osomashishini, kwaye xa uyise efa, wathatha ishishini lentsapho, iMars, Inc, kwaye yadibanisa nenkampani yakhe.
Waqhubeka eqhuba inkampani kwadalela ngo-1973, xa wayethatha umhlalaphantsi waza wabuyisa inkampani kubantwana bakhe. Ngomhlalaphantsi, waqala elinye ikhamphani, u-Ethel M. Chocolates, ogama lakhe lingumama. Le nkampani iyaqhubeka ikhula namhlanje njengomenzi wee-chocolates eziphambili.
Emva kokufa kwakhe eneminyaka eyi-95 e-Miami, eFlorida, ihlathi laseMars kwakuyindoda ecebile kakhulu kweli lizwe, iqokelele i-fortune eqikelelwe kwi-$ 4 billion.
Mars, Inc. Iyaqhubeka Ukuphucula
Inkampani eqalwe yintsapho yaseMars iyaqhubeka iyinkampani yokukhiqiza yokutya yokuqala, kunye nezityalo ezininzi zokuvelisa e-US nakwamanye amazwe. Amanqaku amaninzi amaninzi aqeshwe ngamagama ayinxalenye yeepotfoliyo zayo, kungekhona nje kuphela iimveliso ze-candy, kodwa kunye nokutya kwezilwanyana, ukufuna i-chewing gum kunye nezinye izinto eziphathekayo. Phakathi kweempawu onokungazifumani nazo zihlobene ne-M & M candies:
I ziqhamo zeJerry
Ungayifumana iLeptospirosis ukusuka kwiCan Soft Drinks?
Ukuhlulwa Kwezandla kwii-Star Wars Movies
Indlela abaxhasi beBallet baKhenketho ngayo (ngoxa besenjalo ukudansa)